कोरोना बढेपछि कक्षा १० को बोर्ड परीक्षा र’द्द , १२ को स्थ’गित – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. कोरोना बढेपछि कक्षा १० को बोर्ड परीक्षा र’द्द , १२ को स्थ’गित – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
भारतमा को’रोना भाइ’रसको दोस्रो लहरका कारण जनजीवन प्र’भावित बन्दै गएको छ।
राज्यका केहि शहरमा लकडाउन गरिएको छ। एकैदिन लाखौं सं’क्रमित थपिँदै गएका छन्।
कोरोना सं’क्रमित बढ्दै गएपछि सरकारले क’डा कदम लिँदै गएको छ। यसैबीच, भारतमा कक्षा १० को परीक्षा र’द्द गरिएको छ। भने कक्षा १२ को परीक्षा पनि हाललाई स्थ’गित गर्ने निर्णय भएको भारतीय सञ्चार माध्यम जनाएका छन्।
कक्षा १० मा आन्तरिक मूल्यांकनलाई नै आधार मानेर विद्यार्थीहरु पास फे’ल हुनेछन् भने कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षाबारे जुन १ तारिखमा बैठक बसेर छलफल हुने अधिकारीहरुले जनाएका छन।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको April 14, 2021 April 14, 2021 294 Viewed